Akara ọkpụkpụ azụ, nchịkọta nke aghụghọ | Igbu egbugbu
Azụ ọkpụkpụ ọkpụkpụ na nkọwa ha kọwara
Antonio Fdez | | Attdị Anụmanụ
You nwetụla mgbe ị na-eche ma egbugbu ọkpụkpụ azụ nwere ihe ọ bụla pụrụ iche? Eziokwu bụ na egbugbu ọkpụkpụ azụ, ma ọ bụ ọkpụkpụ azụ, nwere akara ngosi nke aka ha. Ọ bụ ya mere na ọ bụghị a ụdị egbugbu oke na eyi obere ndi mmadu gburugburu uwa. Onweghi otutu mmadu ndi nwere ihe atugbu a na aru ha.
na azu egbugbu Ha na-ewu ewu karịsịa na ndị nwere ụfọdụ ụdị njikọ na oke osimiri. Nke ahụ bụ, ndị ọkwọ ụgbọ mmiri mara mma, ndị ọkụ azụ ma ọ bụ ndị mmadụ hụrụ osimiri n'anya na ihe niile gbara gburugburu ọrụ ụgbọ mmiri. Ọ dịkwa mkpa iburu n'uche na egbugbu ọkpụkpụ azụ bụ ihe okike sitere na omenala ndị Hawaii. Mmekọrịta a dị ezigbo mkpa.
Ma, Kedu ihe ọkpụkpụ ọkpụkpụ azụ pụtara? Ndị mmadụ yi iberibe ọkpụkpụ azụ bụ ihe nnọchianya nke ọkpụkpụ ha ga-abụ. Ha bụ ụzọ dị mma iji gosi ụwa na anyị nwere njikọ pụrụ iche na oké osimiri nakwa na ọ bụ ụwa nke anyị.
Na azu ọkpụkpụ gallery tattoo nke so isiokwu a, ị ga-ahụ ọtụtụ usoro eji emepụta ihe. Offọdụ n'ime ha dị oke nghọta ma dịkwa mfe, ebe ndị ọzọ buru ibu, na-eju anya yana ụdị nkọwa niile na-ewetara ha nso ịke mara mma. Ha bụ egbugbu na-adọrọ mmasị na nke ahụ na-eji tonic na-emebu eme ihe, ebe ọ bụ na a na-eche ya na ha nwere ihe na-adịghị mma.
Foto nke Azụ Rasp Tattoos
Pathzọ zuru ezu na edemede: Igbu egbugbu » Ofdị egbugbu » Attdị Anụmanụ » Azụ ọkpụkpụ ọkpụkpụ na nkọwa ha kọwara
Na-aga n'ihu Mo Ganji tattoos
Isiokwu gbasara omenala ndị egbugbu ndị Japan